१ लाख २१ हजारले दिए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा आवेदन, कुन पदमा कतिले दिए ? « Artha Path
१ लाख २१ हजारले दिए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा आवेदन, कुन पदमा कतिले दिए ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्मचारी आह्वानमा १ लाखभन्दा बढीले आवेदन भरेका छन् । बैंकले विभिन्न ६ पदका लागि कर्मचारी मागेकोमा मंसिर ५ गते आइतबारसम्म १ लाख २२ हजारले आवेदन दिएका हुन् । बैंकले कात्तिक १५ गतेदेखि विभिन्न ६ पदका लागि ८३६ जना कर्मचारीका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । मंसिर ५ गतेसम्म सिंगल दस्तुर र अबका ७ दिन अर्थात मंसिर १२ गतेसम्म भने दोब्बर दस्तुर तिरेर फाराम भर्न सकिन्छ ।
बैंकले दिएको जानकारी अनुसार मंसिर ५ गतेसम्म १ लाख २२ हजार जना आवेदकले फाराम भरेका छन् । दोब्बर दस्तुरमा फाराम भर्नेको संख्या करिब ३ हजार जति हुनसक्ने आँकलन बैंकले गरेको छ । बैंकले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णदेखि स्नातकोत्तर उत्तीर्णसम्मका लागि रोजगारी दिने भएको हो ।
तह ५ को वरिष्ठ सहायक (नगद) ६ हजार १९ जना,
तह ४ को सहायक (नगद) मा १७ हजार ३२० जना…
इच्छुक उमेद्वारले दोब्बर दस्तुर तिरेर मंसिर १२ गतेभित्र आवेदन फारम बुझाउन सक्ने बैंकले जनाएका छ । लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले लिने भएकाले उम्मेदवारहरुबीच प्रतिस्पर्धा गरी बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई छनौट गरिने बैंकले जनाएको छ । लिखित परीक्षा पास गरेकाहरुलाई बैंकले मौखिक परीक्षा पनि लिनेछ । तलव तथा सुविधा बैंकको नियम अनुसार हुने सूचनामा उल्लेख छ । बैंकमा जागिर खाने नयाँ कर्मचारीका हकमा महिलालाई ६ महिना र पुरुषलाई १ वर्ष परीक्षण अवधि रहेको बैंकले जनाएको छ ।